« Tsy miova… » -
AccueilTresaka« Tsy miova… »
10/04/2018 admintriatra Tresaka 0
Na efa nitodi-damosina tamin-dRavalomanana Marc avokoa aza ny akaiky azy tamin’ireny krizy 2009 ireny dia tsy mba nino izany izy. Vao mainka namoaka vavabe tamin’ ny mponin’Antananarivo hoe « tsapao aloha ny herinareo » izy. Tsy mety diso mihitsy izany Ravalomanana izany, ka na dia efa naloan’ny vahoaka aza dia mbola mihevitra ny ho Filoha hatrany. Tsy manaiky diso ihany koa, ka na dia efa nomelohin’ny Fitsarana tamin’ny raharaha fitifiran’olona teny Ambohitsorohitra tamin’ny 7 febroary 2009 aza dia mihevitra fa madio mangatsakatsaka. Mbola mitohy ihany moa izany fiheverana fa ambonin’y lalàna izany, ka nolazainy indray fa tokony haka saina hono aloha ny Filoha ankehitriny sy ny filohan’ny Hcc amin’iny lalàm-pifidianana vao nofidian’ireo depiote teo iny.
Asainy mandinika ny feon’ny fieritreretany mihitsy ny tsirairay manoloana an’iny lalàm-pifidianana vao lany teny amin’ny Antenimieram-pirenena iny. Mbola ilàna feon’ny fieritreretana ve ny fanekena ny tsy famelana ireo efa maloto dosie sy manan-draharaha eny amin’ny tribonaly. Tsy ry Ravalomanana Marc, namoahan’ny fitsarana sazy henjana aza ve no tokony hahay hanaja tena tsy hirotsaka hofidiana intsony, raha mba nihaino kely ny feon’ny fieritreretany izy.
Izay tsy fahalalana oniny izay mihitsy no tokony hanaovana itony lalàm-pifidianana itony mba hisian’ny fifidianana madio. Tsy izay efa nanimba ny firenena sy nampahantra ny Malagasy intsony no hahazo sehatra. Rariny sy hitsiny mihitsy raha misy ny lalàna madio toa itony mba hifehezana itony mpanao politika tsy mahalala onony itony. Tsy rariny kosa raha ny mpanao politika efa nanimba firenena no mbola homena sehatra indray.
Namoaka fanambarana anaty gazety moa ny tenany hilazany ny heviny momba iny lalàm-pifidianana iny, ary raha fintinina ny tiany hambara dia lazainy fa tsy nanaraka ny etika hono no nifidianana iny lalàna iny. Mbola ratsy lavitra noho ny tsy fanajana etika ny fiheverana ho tsimatimanota. Taiza no nisy mpanao politika sahy manohitra didim-pitsarana izany raha tsy Ravalomanana. Sady tsy vitan’izay fa mbola sahiny ny milaza fa fitsarana tsy mahefa.
Ny filoha teo aloha Ravalomanana mihitsy no tokony hihaino ny feon’ny fieritreretany manolona ny dosie malotony sy ny sazy tokony hefainy, ka izy ihany dia mahatsapa tena fa tsy mendrika ho kandidà mandrakizay ny tenany.
‘’Mijoroa amin’ny fahamarinana ,tezao ny olona amin’ny finonana maha kristianina, izany no zava-dehibe hampandrosoana ny firenena ,mijoroa ianareo’’io no nambaran’ny filoham-pirenena nandritra ny fandraisam-pitenenany tany Manakara nandritra ny jobily faha-76 ny toby Ankaramalaza ,sy fanokanana ...Tohiny